Amabhethri ngoba nezimoto bezentengiselwano: brand kanye nokubuyekeza ngazo
Amabhethri ngoba nezimoto bezentengiselwano uotlichayutsya kusukela amabhethri asetshenziswe izimoto izimoto ekilasini ukukhanya. Basuke eziqhutshwa ibhethri, amandla awo zokhahlamba kusuka namashumi amabili amabili namashumi amathathu ampere-amahora. Khetha ukhetho engcono yokusiza idivayisi ngezigaba ohlukanisa ibhethri ngezigaba ezintathu eziyinhloko: HD, SHD, HDE. Cabangela izici ekilasini ngalinye, futhi abanye abakhiqizi. Lokhu kuzovumela ukukhetha varinat eliphezulu iyiphi iloli.
Izici Zabantu amabhethri asetshenziswe zinqola-lift anezici ezithile. Amabhethri ngoba nezimoto bezentengiselwano libhekene izinkomba ezilandelayo:
Ubukhulu and mshini umenzi;
inkathi yokusetshenziswa namakhono;
abe okusezingeni eliphezulu sokuqala zamanje;
akheke nge ukumelana lenyuka ukuze vibration;
Basuke ifakwe kazimele oqinile;
ibhethri ingashintshwa ukuze ukuxhashazwa olunzulu;
ukumelana inombolo enkulu kwenkokhiso imijikelezo.
Ithebula elilandelayo presents ibhethri okuyisibonelo elishajekayo ukuhambisana nezinkomba kanye nohlobo imoto.
umthamo webhethri (amp / amahora)
Umthamo amandla iyunithi ngamalitha
Kusuka ku-1 kuya ku 1.9
SUV futhi crossovers
Kusukela 1.4 kuya 3.2
Low-tonnage naphakathi amaloli
Kusukela 1.9 kuya 4.5
Amaloli (medium and enkulu)
3.8 - 10.9
Imishini ekhethekile (ogandaganda, abembayo, izitimela)
7.2 - 17
imoto Amabhethri ngoba nezimoto bezentengiselwano unomzimba side ngaphezulu ngesandla esisodwa imikhondo. Amabhethri ngemishini emikhulu ayatholakala nge polarity eqondile reverse. Amabhethri yalolu hlobo nesisindo ngaphezu kwamaminithi umgibeli analogue, okuyinto kubangelwa sebuningini amapuleti okuyinto zenzelwe ukunikeza ezidingekayo inrush zamanje kanye namandla ibhethri.
izakhi engeziwe wathola hybrid iloli ukulungiswa ihambisane amapuleti emihle nemibi izingxenye phambili nge-calcium. In the line sebhetri iloli kuyinto 24 volts ogibele ogandaganda futhi ekhethekile.
Izinhlobo kanye Properties yabo
Amabhethri ngoba nezimoto bezentengiselwano, abakhiqizi abaningi zihlukaniswe ngezigaba ezintathu ezisemqoka, okuyi:
HD (Duty Heavy). Imikhiqizo zishibhile amabhethri serviced ukuthi basuke efakwe kwi lorries ephethe namandla esithwele encane, ifakwe abasebenzi zikagesi.
SHD (Duty Super Heavy). Lezi amabhethri zenzelwe usebenze izimo ezimbi kakhulu futhi izimo ezinzima zezulu. Amabhethri zaloluhlobo zinzima ka design ethuthukisiwe, anda ukumelana nesibalo icala-osenyameni imijikelezo namandla amakhulu sokuqala. Lokhu ingxenye ibhethri zivame eyenziwe inguqulo hybrid.
HDE (Heavy Duty engaphezulu). ibhethri iloli (ezingamashumi amabili nane volts) iqembu kugcinwe kwi ukwakhiwa, akhethekile ogandaganda abakhulu. Amabhethri amandla ifakwe izindlu amapuleti i ukumelana lenyuka ukuze vibration.
Okufanele ayicabangele lapho ekhetha?
Lapho ekhetha amabhethri abanikazi iloli elikhulu kufanele ungacabangi nje kuphela umthamo esitokisini, kodwa futhi lingakanani, kokuqala indawo yamanje terminals. I izici ukusebenza amabhethri kuncike ezicini ezihlukahlukene zesakhiwo nakwezobuchwepheshe. Ngenxa yalokho, izimo ezivela abakhiqizi ezahlukene, kodwa ezifanayo imingcele okuzisholo kungahluka ngokuya ukugcinwa kanye nokusebenza.
Enye yezimfanelo eziyinhloko ukuthi kufanele ibe kwebhethri amaloli, olumelana imibuso ehlukene ezishisayo, ikakhulukazi okushisa sub-zero. Kufanele kuqashelwe ukuthi uma kwenzeka ukwehluleka elilodwa ibhethri, kutuswa ukuba esikhundleni ngokuphelele umbhangqwana. Kungenjalo, isici esisha kuyoba umehluko ukumelana kwangaphakathi, okuyinto igcwele zokugwema ukuphuka kokubili amabhethri.
iloli Brand amabhethri
Cabangela ezinye zezihloko okukhulunywa brand ethandwa kakhulu ukuthi ukukhiqiza amabhethri for amaloli. Asiqale nabakhiqizi yasekhaya:
umkhiqizi Russian of "Ak-Tex". Le nkampani usebenza njengengxenye ye Tyumen battery isitshalo, ukhiqiza ezahlukeneyo eziningana amabhethri. Ububanzi ifaka izinto "Beast-TT '," Solo "," i-Orion. " Lezi amayunithi ziklanyelwe ukuhlangabezana ukusebenza kwabo nezimoto bezentengiselwano. Sinenkosi inrush okusezingeni eliphezulu imingcele yamanje, kanye isikhathi eside ukusetshenziswa.
Amabhethri ngoba nezimoto bezentengiselwano (225) "Acoma" igxile hhayi kuphela imishini esindayo, kodwa futhi phezu izimoto zilandelwa. izakhi Itholakala umthamo sithuthukiswe ngoba amabili nane electrode nambili volt ukushaja ezomile, amelana okushisa angaphansi kwezinga-qhwa futhi ukucindezeleka mechanical.
Inkampani TUBOR ukuqongelela Energy inikeza abasebenzisi nge battery ethuthukisiwe, emzimbeni elenziwe ukusetshenziswa ubuchwepheshe ezintsha. I element kufanelekile omkhulu tonnage amaloli nezimoto wezolimo.
onobuhle angaphandle Popular
Popular analogue angaphandle emelelwa isiJalimane, American, isi-Polish, isi-Japanese futhi abakhiqizi Chinese.
inkampani German "Bosch" linikeza ibhethri, ezithinta zonke izici ezidingekayo ukuze elilungile indawo ukusebenza. Ibhethri has impilo enhle ukusebenza, kulula ukuyinakekela. Phakathi abakhiqizi German ungaphawula lemikhiqizo ezifana "The Mall", "varta", "Energizer".
Phakathi kwezinye izinketho, siphawula nokulungiswa ezilandelayo:
"Schneider", "Isikhungo", "Storm" (Poland).
"Yuasa", "Furukawa" (Japan).
"Hagen", "Exideuil", "DEKA" (Melika).
"Ithebhu.", "Vertex", "Ista", "Oberon" (China ne co-production).
Okunye izimo zokukhiqiza Artisanal ukuzethemba kakhulu musa abangele.
Iningi amabhethri lanamuhla commercial ezivezwa ubuchwepheshe obusha nokusetshenziswa Alloys ekhethekile. Izakhi bavikelekile ukugqwala futhi ube ukumelana vibration.
Abaningi kwebhethri inkomba inikezwa, okuvumela ukuvimbela ukuphazamiseka kungenzeka ezihlobene idivayisi khulula. amadivaysi yesivalo Special ukusiza ukugwema ukuvuza ibhethri, ngisho kwenzeka ukudluliselwa.
Amabhethri enziwe ubuchwepheshe bakamuva nje kanye nezidingo obusayo imodi idolobha kanye ngakanye elide uhambo kahle. Ngokuvamile, isici ivaliwe ngokuphelele futhi ifakwe ukuvikelwa okungeziwe ngesimo CAPS futhi refractory plastic.
Qaphela ukuthi abanikazi iloli mayelana ibhethri? Okokuqala, udinga ukukhetha ibhethri ngokuvumelana bhukwana imfundo. Okwesibili, isidingo ukuqinisekisa ikhwalithi imikhiqizo okuyinto nokobana distributor. Futhi ekugcineni - udinga ukufaka ngendlela efanele futhi silondoloze ukuma-yedwa ibhethri ishaja.
Ishaja iloli amabhethri iyona nto, esesikhundleni nesidingo esikhulu voltage ekuqaleni enikeziwe. Noma kunjalo, lezi zinto enze kube nokwenzeka ukuba ukuqhuba iloli isikhathi eside ngaphandle lingatshajwa. izinhlobonhlobo Ibhethri ukunikeza ithuba thatha iyunithi, eyenzelwe ethile umthwalo futhi ugesi. Umsebenzisi Izibuyekezo qinisekisa ukuthi ukhetha amabhethri for amaloli Kulula uma wazi amandla namandla ukusetshenziswa nezidingo.
Uhlelo "Plato" - kuyini? Isistimu yokushaja isiRussia yamaloli enesisindo esingaphezu kwamathani angu-12
China Izinsiza kusebenza okubalulekile: usezingeni imishini ukwakhiwa komgwaqo eziphezulu kusuka China
Kungani iketanga leli sondo nokuthi iquketheni thina?
"Lawn-Next" (amaloli okulahla): incazelo, ukubuyekezwa kanye namanani
I-Mazda Titan: Umlando Namuhla
Ibusa Roman: yabasubathi umsebenzi, Filmography, umndeni
"Kinder Ubisi Slice" nezinye izinhlobo zemikhiqizo
Margaret Weis: Biography, izincwadi
ISilekeleli Sokwazisa - Iyini? Kanjani sokuzinqumela iSilekeleli Sokwazisa?
Yikuphi ezikhangayo Ho Chi Minh City kuthiwa kuwufanele ngokuvakashela?
ID Ucingo: wazi kanjani esikhathini sethu
Eyesibili impilo ihadiwe: sandblasting of izinsimbi
Umakoti umgubuzelo: umlando, izimpawu kanye nezincomo ngekutsi thishela ukhetsa
"I-Acyclovir": amaphilisi anqoba i-herpes
White Gold: efana Isiliva zihlukaniswa ensimbi ezibizayo
Nethempeli Cosmas futhi Damian ku Maroseyka: Esikhathini Esidlule Nanamuhla